Ukutywina intswela ngqesho ngeselula: ungayenza njani inyathelo ngenyathelo | Ezezimali
Ukutywina ukumiswa kweselfowuni
Namhlanje siphila sincamathele kwiselfowuni. Kufana nokungathi, xa siphuma, okanye besisekhaya, iselfowuni yaba lolunye ukongezwa komzimba wethu. Ewe kunjalo, oko kuthetha ukuba yonke into ebesiyenza kunye nekhompyuter, okanye ngaphandle kokuxhomekeka kubuchwephesha, ngoku sigqiba ukuyenza ngeselula. Umzekelo, tywina ukunqunyanyiswa ngeselula, yenza ukuthengwa kwi-Intanethi okanye ukhanyise okanye ucime izibane.
Kuyinyani ukuba ukusebenzisa iselfowuni, okanye ngokubanzi ubuchwepheshe, kuthintela inkqubo ende yezobuchwephesha (iiyure zokulinda, ukwenziwa kwamaxwebhu ngokusesikweni, njl. Njl. Nangona kunjalo, akukaze kubuhlungu ukuba neendlela ezininzi; kwaye yile nto siyifumanayo Ngexesha lokutywina ukumiswa kweselfowuni. Oko akuthethi ukuba kukho olo khetho kuphela, kodwa unokufumana uninzi kwaye ukhethe olukufaneleyo. Kodwa ungayenza njani kwiselfowuni? Siyakucacisela.
1 Ikhadi lokungasebenzi
2 Izinto eziluncedo zokutywina intswela ngqesho ngeselula
3 Inyathelo nenyathelo lokutywina ukunqunyanyiswa ngeselula
4 Kuthekani ukuba ndiyalibala ukutywina ugwayimbo
Ikhadi lokungaphangeli luxwebhu oluqinisekisa ukuba ubhalisile njengomntu ofuna umsebenzi kwiofisi yengqesho ehambelana nawe. Kuyo, idatha yakho iqokelelwa, kodwa kunye nomhla ekufuneka ihlaziyiwe ngawo. Ngoba? Kungenxa yokuba ixesha leenyanga ezintathu kwiinyanga ezintathu ukujonga ukuba imeko yalomsebenzi ikwazile na ukutshintsha (umzekelo kuba ufumene umsebenzi, kuba sele ezisebenzele ...).
Njengokuba ixesha lihamba, loo mntu ufumana "isikhundla" esisebenzayo, phakathi kwezinye izinto, sokucela uncedo kubantu abangaphangeliyo ixesha elide. Nangona kunjalo, ukufezekisa oku, kuya kufuneka usitywine isitrayikhi rhoqo, ngaphandle kokukulibala.
Izinto eziluncedo zokutywina intswela ngqesho ngeselula
Ngaphambili, ukutywina uqhankqalazo, kuye kwafuneka uye e-ofisini ulinde emgceni ukuze bakunakekele kwaye bakufake isitampu. Ngoku, yonke into iyakhawuleza kakhulu, ngakumbi kuba unokhetho oluninzi lokudlula kugwayimbo. Kodwa, enye yezona zisetyenziswa kakhulu yi tywina ukumiswa ngeselfowuni.
Ngapha koko, inokwenziwa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo:
Ngokukhangela kwiselfowuni kwaye uyenze ngokungathi uyanyathela kwi-Intanethi.
Ngokusebenzisa izicelo ezizodwa.
Oku kunezibonelelo ezininzi, ezinje:
Inyani lokukwazi ukutywina ukumiswa ngeselfowuni nanini na ufuna. Ewe kunjalo, ngalo kanye usuku kufuneka ulichithe, hayi usuku olungaphambi okanye usuku olulandelayo. Kodwa uneeyure ezingama-24 zokwenza.
Akukho mfuneko yokuba uye kwenye indawo ukuze uphumelele ugwayimbo. Ungayenza ekhayeni lakho okanye naphi na apho ukhoyo kuba uya kuyenza ngesixhobo esiphathwayo.
Ayizukuthatha ixesha elide ukuyenza. Ngapha koko, ngaphandle kokuba kukho ingxaki yoqhagamshelo okanye iphepha okanye usetyenziso luphantsi, ayizukuthatha ngaphezulu kwemizuzu emi-5 ukuyenza, kwaye ungalibala emva kwayo yonke loo nto.
Inyathelo nenyathelo lokutywina ukunqunyanyiswa ngeselula
Ngoku ukuba unomxholo omncinci, lixesha lokuba sikunike amanyathelo ekufuneka uwagqibile ukutywina ngempumelelo isitrayikhi. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba, ukuze ukwazi ukwenza njalo, kubalulekile ukuyicela kwangaphambili e-ofisini, nokuba kwangaxeshanye ubhalise njengomntu ofuna umsebenzi okanye ngalo naliphi na ixesha unexesha lokuma eofisini kwaye ulawulo.
Kwaye kunjalo, ukuze ukwazi ukufikelela ekutywineni ukungabikho kwemisebenzi ngefowuni kufuneka iziqinisekiso. Oku ngamagama omsebenzisi kunye negama lokugqitha, kodwa kufuneka unikwe iofisi. Kwezinye iindawo ezizimeleyo bayakuvumela, ngomnxeba, ukulawula le nkqubo, kodwa ayiqhelekanga.
Kuya kufuneka uyazi ukuba Uluntu ngalunye lunephepha lewebhu okanye usetyenziso lweselfowuni yokwenza inkqubo yokutywina intswela-ngqesho ngeselula. Kuya kufuneka bakwazise ngelixa ucela iziqinisekiso, apho baya kukunika iphepha okanye usetyenziso ekufuneka ulusebenzise.
Ke, kuya kufuneka:
Fikelela kwiwebhusayithi okanye usetyenziso oluyifunayo kwiselfowuni.
Ngenisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha onikwe lona.
Nje ukuba ugqibile, uya kuba kwi-Employment Portal yoluntu lwakho oluzimeleyo kwaye apha, ngokuxhomekeke kwi-app okanye kwiwebhusayithi, kuya kufuneka ufumane icandelo elisebenza ukuvuselela isicelo somsebenzi. Umzekelo, kwimeko yaseMadrid, oku kuya kuba «Umsebenzi» «Iinkonzo zeemfuno zengqesho». Ezinye zilula kwaye zinomdla ngakumbi kuba, ngokusebenzisa iapp, zikuvumela ukuba ucofe indawo ukuvuselela intswela-ngqesho ngaphandle kokuyikhangela.
Kuthekani ukuba ndiyalibala ukutywina ugwayimbo
Inokwenzeka imeko yokuba ulibale ukutywina ugwayimbo. Nangona uneendlela ezininzi zokwenza, akunakuphepheka ukuba, kuba kuya kufuneka uyitywine kuphela emva kweenyanga ezi-3, uyakuyiphosa ukuyenza, ngaphandle kokuba uyibhale phantsi kwindawo eqinisekileyo ukuba uyakuyibona kwaye uyikhumbule yonke imihla.
Ingxaki kukuba ukuba uyalibala, uya kuba nexesha elinzima lokuzithethelela, kwaye unako jongana nezohlwayo, ngakumbi ukuba uqokelela isibonelelo sokungaphangeli.
Ngokukodwa, ngokwemigaqo ye-SEPE, izohlwayo eziya kumiselwa kuwe ziya kuba:
Ukuba kokokuqala, kwaye uqokelela isibonelelo sokungaphangeli, uyakuphulukana nenyanga enye kweso sibonelelo. Ukuba uyazilibala isihlandlo sesibini, kwimeko enjalo uya kuphulukana neenyanga ezintathu zesibonelelo. Ukuba kungowesithathu, uza kohlwaywa ngeenyanga ezintandathu zokuphulukana nesibonelelo. Kwaye okwesine, uya kuphulukana nayo yonke into onayo ukuze uyiqokelele kungabikho kwemisebenzi.
Kwimeko apho uqokelela iNgeniso yokuSebenza eSebenzayo, ukuba awusivuseleli isicelo, uya kuphulukana noncedo ngokuzenzekelayo.
Kukho iimeko ezimbalwa apho unokuthethelela ukulibaziseka ekuhlaziyweni kwentswela-ngqesho, kwaye zezi:
Ngenxa yokugula, okoko nje unesiqinisekiso sekhefu lonyango esilungisa loo ngxaki.
Kumsebenzi woluntu, Oko kukuthi, kufuneka uye kwiminyhadala yoluntu, njnetyala (njengejaji).
Ukuba uqeqesho, oko kukuthi, iikhosi zoqeqesho. Ukuba zizo iikhosi ezenziwa yi-SEPE uqobo, kwiindawo ezininzi isicelo sakho somsebenzi sinqunyanyisiwe, oko kukuthi, awunyanzelekanga ukuba uyihlaziye. Kodwa, lumka, kuba awuzukufikelela kwimisebenzi oyinikwayo ngelixa uqeqesho luhlala ngaphandle kokuba uye ngqo uye kubuza ukuba ubhalise kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Ukutywina ukumiswa kweselfowuni